Nanohitra mavitrika ny jadona miaramila ny olompirenena tao Myanmar nanao ny fitokonana faobe ‘22222’ · Global Voices teny Malagasy
Fitokonana no goavana indrindra nanerana ny firenena hatramin'ny fanonganam-panjakana 1 Febroary
Voadika ny 01 Marsa 2021 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, русский, Ελληνικά, English
Nomena laza amin'ny “22222” na “Roa anankidimy” iza mifandraika amin'ny daty (22/2/2021), io fitokonana io no nahavory olona be indrindra hatramin'ny nandrombahan'ny miaramila ny fahefana tamin'ny 1 Febroary.
Maro ireo tatitra nampitaha izao hetsika fitokonana izao tamin'ny fitroarana nanerana ny firenena ho fihaikana ny jadona miaramila tamin'ny 8 Aogositra 1988 (Valo efatra) .
Nanomboka [mg] ny hetsika tsy fankatoavan'ny sivily ny olom-pirenena ho setrin'ny fanonganam-panjakana. Nahazo fanohanana sy laza ny fanentanana na dia teo aza ny fandrarana na fanapahana izay miresaka hetsika, ny fahatapatapahan'ny aterineto, ary ny fampiasan'ny mpitandro ny filaminana herisetra ho famongorana ireo hetsika manohitra ny fanonganam-panjakana.
Namoaka fijery ankapobeny taminy hetsika tamin'ny alatsinainy ny mpanoratra an-gazety Wa Lone:
Ny “hafatra masiaka” dia mifandraika amin'ny fanambaràna navoakan'ny manampahefana manaratsy ny fitokonana sy mandrahona ireo mpandray anjara, hetsika izay nomelohin'ny manampahaizana manokana iray avy amin'ny Firenena Mikambana avy hatrany.
Mpandray anjara iray amin'ny fitokonana no niteny tamin'ny gazetiboky Frontier momba ny firotsahan'ny mpiasa hiady amin'ny jadona miaramila:
Fihariana maro no nanakatona ny asany ho fitsinjovana ny fitokonana.